Inona no atao hoe Deepfakes ary inona no naharetan'io tranga io? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 June 2019	• 1 Comment
Matetika aho no niresaka momba ny teknika izay ahafahana mamorona endri-tsoratra lalina. Ho an'ireo mpamaky vaovao, te-hamerina izany eto aho amin'ny antsipirihany bebe kokoa amin'ny lahatsoratra manokana natokana amin'ity lohahevitra ity. Satria raha manaraka ny vaovao isan'andro ianao, dia tena zava-dehibe ny hahafantaranao an'io foto-kevitra io, satria ho hitanao hoe inona ireo teknika azo ampiasaina mba hilalao fotsiny ny olona. Tena mora.
Ny Deepfakes dia natao amin'ny alalan'ny GAN (Tambajotram-panafahana)) teknika rindrambaiko. Izany no rindrambaiko manan-tsaina, izay, miorina amin'ny rafitra maro ao amin'ny AI ao anaty tambanjotra iray, dia mamorona endrika avy amin'ny tsy misy. AI dia Anglisy ho an'ny Intelligence; inona no dikan'ny fahagagana amin'ny artificial. Ny tambajotra AI hafa dia mandinika ireo sary noforonin'ny tambajotra voalohany ary mandà na mankato azy ireo. Amin'ny fanatanterahana izany amin'ny tsingerintaona dia manjavozavo kokoa ny tarehintsoratra amin'ny dingana tsirairay, mba hahafahanao mamorona endriny feno olona izay mitovy amin'ny olon-tsotra tsotra (izay mety hihaona eny an-dalambe fotsiny). Raha te-hahafantatra tsara ny fomba fiasanao ianao, alao aloha ny horonan-tsary eto ambany avy amin'ny NVIDIA (ilay mpaka sary fanta-daza ho an'ny PC).
Tsy ilaina fotsiny ny mahafantatra fa misy io fomba fitsaboana goavana io, fa koa ny fomba fampiasana toetra mahafinaritra azo ampiasaina amin'ny, ohatra, horonan-tsary na famoronana profiles media sosialy (anisan'izany ny tantara manontolo, anisan'izany ny sary sy ny horonan-tsary ary ny tiany avy amin'ny hafa) media profiles amin'ny media sosialy). Ohatra, ny fifanakalozan-kevitra amin'ny media sosialy dia mora amin'ny fanaraha-maso an-tserasera amin'ny alàlan'ny "mpiasa an-trano" na mpiara-miasa amin'ny serivisy telemarketing, ohatra, izay mety ho niafenan'ireo endrika sangan'olona azonao ao ambadik'ity profesora lalao ity. Azon'izy ireo atao ny manafika ny olona amin'ny andian-dahatsoratra ao aminy mba hiatrehana ny fihetseham-po eo amin'ny vahoaka amin'ny lalana iray.
Andeha hojerentsika ny mety ho fampiharana rehetra, saingy alohan'ny hanombohantsika dia ilaina ny mahafantatra fa ny teknika lalao sy ny orinasan-tsarimihetsika, ary koa ny TV mpamokatra, dia efa nahazatra nandritra ny fotoana lava. Na dia izany aza, ny asa dia efa voadinika amin'ny fomba maivana ka azonao atao izany ao amin'ny PC-an-trano-trano sy lakozia.
Rehefa maty i Paul Walker teo afovoan'ny horonantsary Fast and Furious 7, dia nantsoina ny orinasa Weta Digital mba hamenoana ny sarimihetsika Paul Walker. Mifototra amin'ny fomba maromaro tahaka ny sary tranainy, ny fijerena ny vatan'i Paul sy ny famoahana ny lohan'i Paul, dia nitondra an'i Paul Walker ho velona indray i Weta Digital. Ity lahatsary eto ambany ity dia mamintina ny fomba fiasan'io asa io.
Ny teknikan'ny Fihetsiketsehana 3D dia efa nisy nandritra ny taona maro izay nahatonga ireo mpilalao nanao fitaratra mba hanoratana ny hetsika ary avy eo dia namorona tarehimarika ny CGI. Izany dia mampitaha ny teknika ampiasaina ho an'ny Paul Walker, afa-tsy amin'ny mpilalao velona manao akanjo fitakiana fihetsika. Ity teknika ity dia misy ihany koa ho an'ireo olona manana tetibola ambany (jereo ny horonantsary etsy ambany), fa ohatra tsara amin'ny sarimihetsika iray izay nampiasana an'io teknika io ny sarimihetsika Avatar avy amin'ny 2009 (jereo eto).
Efa nahasosotra ny fampiasana ireo akanjo sy teknolojia CGI ireo ny NVIDIA, satria mampiasa ny tambajotra tsy ara-dalàna izy mba hampiofanana ny rindrambaiko. Raha ny marina dia toy izany ihany koa ny teknika ao ambadiky ny facefake. Tsy afaka mamorona endrika tsy misy i NVIDIA amin'izao fotoana izao, fa afaka mitondra fiara amin'ny alalan'ny fakantsary ary mamadika izany amin'ny ririnina (amin'ny fotoana tena izy). Ny teknika toy izany dia azo ampiasaina hampiofanana ny rindrambaiko AI amin'ny fiara mitondra fiara amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, saingy azo ampiasaina ihany koa izy ireo mba hanaovana fitiliana fanosehana tsy ilaina. Tsy ampy ny fakantsary GoPro tsotra na webcam. Jereo ny 1: 03 min. Ao amin'ny lahatsary etsy ambany mba hijerena ny fomba fiasany.
Ankehitriny dia mety hieritreritra ianao fa ny fahafahana hanao izany amin'ny fotoana tena izy dia tsy misy. Mieritrereta indray. Efa hitantsika etsy ambony fa azo atao ny mamorona olona tsy misy ao anaty tambajotra Generatives Adversarial Networks. Fantatray amin'izao fotoana izao fa ny tontolo iainana an-tanandehibe sy ny toetra iray dia mety hiteraka amin'ny tamba-jotra tsy miankina. Ny fanontaniana dia hoe azo atao ve izany amin'ny fotoana mahamety izany. Izay no nahatonga ny teknolojia amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny endri-maso. Ity dia manodidina ny PC tsotra tsotra hatramin'ny taona 2015 (jereo ny horonantsary etsy ambany).
Amin'ny ankapobeny, azontsika atao ny manambara fa afaka nahavita lahatsary lalindalina be ny taona maro. Na dia izany aza, nanjary nanatsara tanteraka ny teknolojia tamin'ny fisehoan'ny tambajotram-piterahana mahazatra, tambajotran-tserasera sy ny famerenana amin'ny endriky ny endriky ny endriky ny tarehimarika, ka afaka mamorona tantara manontolo momba ny olona iray tsy misy ao anatin'ny minitra vitsy, fanadihadiana mivantana an'io olona tsy misy io Afaka mamorona tontolo iainana amin'ny fomba fijery kameras sy ny toetry ny toetrandro.
Inona no vokatr'izany? Manomboka miteny ianao, afaka milaza ianao fa tsy afaka natoky ny 100% nandritra ny taona maro. View eto faharetan'ny CGI teknika nampiasaina tamin'ny indostrian'ny sarimihetsika. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia tsotra izao ny olona manana tetibola vola an'arivony euros efa afaka manao izany. Raha heverintsika fa marina ny fampahalalam-baovao, dia afaka mihevitra isika fa tsy nampiasa teknika toy izany nandritra ny taona maro izy ireo. Na izany aza, raha manaiky ny mety hisian'ny governemanta hampiasa ny asan-tsaina ara-tsaina isika mba hampidirana ny vahoaka amin'ny fomba fanekena ny lalàna vaovao sy mafy kokoa, dia tokony ho fantatsika fa nandritra ny taona maro dia tsy nisy na inona na inona mba hisorohana ny vaovao diso. Ao amin'io tontonana io dia mahaliana tokoa ny mahafantatra fa eo am-pelatanan'ny mpamokatra TV (izay sady miliaridera ihany koa) ny sampana vaovaon'ny vaovaon'ny firenena (ny Algemeen Nederlands Persbureau, nanakanana ny ANP). Manao ahoana ny tsy maintsy ataontsika mba hahazoana antoka fa tsy nampiasaina nandritra ny taona maro ireo teknika ireo?
Toa sahiran-tsaina ny haino aman-jery hanakatona ny fery izay efa nopotehin'i Martin Vrijland teo ambanin'ny sambo lehibe momba ny media. Nandritra ny taona maromaro izao, nanazava ny fomba ahafahan'ny media manipika sary. Tsy navela hiditra tao amin'ny programa TV Kelder & Klöpping i Jort Kelder sy Alexander Klöpping fampisehoana inona ny lalomena. Ny fandaharana amin'ny radio Famaritana sary Ny BNR Nieuwsradio (mpitantana ny fanamarihana) vao haingana no nanamarika ny zavatra nosoratako nandritra ny fotoana lava. Mazava fa ny fahagagana dia mahamarika hatrany ary ny mpamorona dia tokony hiezaka ny hitazona ny mpijery sy ny mpihaino. Tokony hanohy hitoky amin'ny fampitam-baovao sy ny demokrasia ianao, satria tsy misy zavatra ratsy kokoa noho ny fikomiana ataon'ny vahoaka (mba hiteny amin'ny teny fonon'ny Jort).
Mazava ho azy fa ny "vahaolana" ho an'izany rehetra izany dia ny governemanta sy ny orinasa teknika no manandrana manamboatra karazam-baovaon'ny sarimihetsika ho an'ny sarimihetsika, mba hahafahan'izy ireo mijery ny maha-izy azy. Ny fanontaniana tokana dia hoe raha ny governemanta dia nampiasa vaovao sandoka nandritra ny taona maro mba hanosika ny lalàna ary hilalao amin'ny vahoaka raha toa ka azo itokisana loatra ny sivana. Hisy ny mosary ve handà ny nofony manokana? Tsia, mazava ho azy fa tsy. Ny vaovao rehetra avy amin'i John de Mol, NOS, De Telegraaf ary ny sisa dia efa azo antoka sy azo antoka tanteraka hatramin'izay! Kuch. Heverinao ve fa hiseho androany na rahampitso amin'ny maraina i John de Mol hilaza hoe: "Indrisy ny vehivavy sy ny raim-pianakaviana, nanao vaovao diso aho tamin'ireo studio sy rindrambaiko TV rehetra izay azoko atolotra. Nosoratako taminao ny vaovao sandoka ary nilalao tamin'ny asa ara-psikolojika tamin'ny vidin'ny taxis ary nameno ny kitapoko"? Tsia, mazava ho azy fa tsy. Ary mazava ho azy fa tsy tokony hino ny fampitam-baovao sy ny governemanta ianao, satria iza no tsy maintsy atokisanao? Vakio eto...
Mety misy fangalàna fonosana:
profesora media fofona
sary sy horonan-tsary avy amin'ny lasa, anisan'izany ny fianakaviana sy ny namana
Resadresaka mivantana amin'ny olona tsy misy
sary avy amin'ny kamera fiarovana
lahatsary ho porofo ao amin'ny vaovao (famokarana vaovao hosoka)
sy ny sisa
Lisitry ny rohy loharano: bnr.nl, wikipedia.org
Ahoana no ahafahan'ny fampahalalam-baovao mamoaka vaovao sandoka miaraka amin'ny fanampian'ny AI (kanto an-tserasera)
Nanazava ilay olana lehibe, fanehoan-kevitra, vahaolana
Tags: adversarial, ai, CGI, deepfakes, Digital, endrika, Featured, Gan, Generative, fahiratan-tsaina, artifisialy, haino aman-jery, vaovao diso, tambajotra, neural, vaovao, NVIDIA, reenactment, Weta
26 June 2019 ao amin'ny 06: 15
Ny mpitarika eto amin'ity planeta ity dia mbola mampiasa fomba teknika ihany. Amin'ny lafiny teknolojia, mitazona ny fotoana izy ireo. Tany aloha dia afaka mitondra fiarakodia feno olona tsy misy mpanohitra koa ianao. Izy ireo dia dingana iray mialoha ny antsika amin'ny alalan'ny fitantanana ny tantara miaraka amin'ny fanampiana amin'ny horonam-boky sy ny toy izany.
Taloha dia nisy ihany koa i Martin izay nanondro ny olona fa voafitaka izy ireo.
Ny zavatra ratsy dia ny fiheveran'ny olona amin'izao fotoana izao fa saro-tahotra noho ny teo alohantsika. Tsy mieritreritra aho fa efa niova ny fiheverana, mbola andevo miasa mafy ho an'ny moka sy ny fisotroana izahay.
Matetika izy ireo dia niteny hoe "tsy tokony hino izay rehetra lazainy"
Androany dia miteny isika hoe "tsy tokony hino izay rehetra hitanao"
« Anja Schaap avy any Katwijk ny Zoma ho avy "nalevina" tao anaty boribory mihidy
Ny fifanarahana amin'ny toetr'andro: mangalatra ny olona amin'ny jiro tsara »
Total visits: 15.891.653
Moa ve ny rafitry ny fiaramanidina Iraniana manohitra ny fiaramanidina Iraniana izay nanala ny Boeing 737-800 (sidina PS752) no voasintona?
Hafiriana no nahitan'i Trump teo amin'ny lasabe izao fa hita maso ny famantarana voalohany amin'ny ady an-trano?
Iran, ny fanafihana an'i Soleimani, ny counterattack sy ny tifitra sidina PS752 rehetra hita avokoa?
Zandi Eyes op Ny Libya dia manome fanazavana momba hoe iza avy ireo firenena any Eoropa no ho voalohany entin'i Turkey
Martin Vrijland op Ny Libya dia manome fanazavana momba hoe iza avy ireo firenena any Eoropa no ho voalohany entin'i Turkey
ZalmInBlik op Ny Libya dia manome fanazavana momba hoe iza avy ireo firenena any Eoropa no ho voalohany entin'i Turkey